Nagu saabsan - Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2005 ee Fujian, Shiinaha, Shirkadeenu waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ku takhasusay R&D, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga qalabka wax lagu daabaco ee ku habboon. waxaan nahay soo saaraha ugu horeeya iyo hogaamiyaha khabiirka duurka ku ah Epson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Walaal, iyo nooc kale oo caan ah oo ku takhasusay noocyo kala duwan.
➢ Inkjet Printer Ink sida khad sublimation, midabka midabka, khad dheeh, khad dtg, khad uv, khad dareeraha eco, khad dareeraha iwm.
➢ Cabbir kala duwan oo ah daabacaadda 'inkabet Epson', sida cabbirka A3 A4, 61cm iyo cabbirka 111cm;
➢ Khadka Doorashada ee aan La-tirtiri karin (qalinka nitrateka doorashada) iyo calaamade aan la tirtiri karin oo loo adeegsaday Barlamaanka ama Madaxweynaha Codeynta ee Afrika iyo dalalka Aasiya oo leh tayo iyo qiime wanaagsan waa bartilmaameedkeena ugu weyn;
➢ Qarka qalinka ah sida khadadka qalinka sabuuradda, qalinka qalinka isha, qashinka qalinka lagu duugo, khamriga khamriga oo loo isticmaali jiray dhammaan noocyada qalinka dib loogu buuxiyo;
➢ TIJ2.5 Koodh gareynta iyo Calaamadeynta sida daabacaadda koodhka, biyaha iyo khamriga dareeraha, kaydadka kaydka ku saleysan biyaha ee ku saleysan dareeraha kaas oo loo adeegsaday daabacaadda barcode;
Si kastaba ha noqotee, si fudud uma bixinno muraayadaha, laakiin waxaan horumarinaynaa xalal habaysan oo si sax ah ugu habboon shuruudahaaga iyo kuwa macaamiishaada oo aad u siiso adeeg dhammaystiran oo OEM leh sumadeena suuqyada gudaha iyo dibaddaba. Awooddeena hal-abuurnimo waxay ku jirtaa horumarinta daabacadaha qashinka loogu talagalay xalalka daabacaadda, iyo sidoo kale alaabta ceeriin, teknoolojiyadda iyo codsiyada. Taas macnaheedu waxa weeye in badeecooyinka cusub ee la soo saaray isla markiiba suuqa la dhigi karo.
Waxaan sii joogi doonnaa hal abuur iyo waxqabad xitaa wajiga horumarka ka dib. Nidaamkeena qaabdhismeedka gaarka ah ee jilicsan ayaa noo ogolaanaya inaan fulino dhammaan waxyaabaha aad rabto. Waxaan kula soconaa tan adiga oo kugu taageerayna goobta si aan u hagaajino howlahaaga isla markaana aan u dammaanad qaadno gaarsiin deg deg ah oo deg deg ah iyada oo loo marayo shabakad saadka oo si fiican u shaqeyneysa.
Shaqaalaha aadka u dadaala ee adiga kaliya laguu xilsaaray ayaa kaa taageeri doona talaabo kasta oo mashruuca ka mid ah waxayna hubin doonaan in su'aalahaaga si dhakhso leh looga jawaabo iyo rabitaankaaga si toos ah ficil ahaan loo dhigo. Obooc oo wata xirmo buuxa oo xalalka shaqsiyeedka ah ayaa isbadal sameynaya oo waxbadan ka ogaanaya nooca faa'iidooyinka iyo xalalka loo dhan yahay ayaa runtii kaa dhigi doonta inaad guuleysato.
Shaqaalaheennu waxay kaa caawinayaan dhammaan baahiyahaaga. Uma aragno nafteena inay yihiin soo saare khad fudud laakiin lamaanayaashaaga lagu kalsoon yahay. Tan waxaa ka mid ah soo saarista taakulo tayo sare leh iyo abaabulida kuu soo gudbinta adiga iyo sidoo kale bixinta taageero farsamo oo loo habeeyay Waxaan ku siineynaa xalalka ugu dhaqaalaha badan dhamaan silsiladaada qiimaha.
1. Sida soo saaraha shahaado ISO9001 iyo ISO14001, xasiloonida khadkeena waa kan ugu fiican Shiinaha, oo ay aqoonsan yihiin macaamiisha iyo tartamayaasha Shiinaha.
2. Mugga iibka ayaa la dhigayaa.
3. Dowladda Filibiin waxay noo dooratay mid ka mid ah kuwa keena khadadka.
4. Waxaan aqbali karnaa ganacsiga khadadka OEM.
5. Waxaan nahay alaab-qeybiyaha lagu kalsoonaan karo ee soosaarayaasha kaydadka Taiwan.
1. khad jumlo ah
2. Dib u buuxi khadka iyo xirmada xirmada
3. Qalabka CISS iyo CISS
4. Kaydadka la jaan qaadi kara
5. Qeyb dhan oo ah daabacayaasha kuleylka iyo qalabkooda
6. Khad gaar ah, sida khad aan tirtiri karin
Waxaan rajeyneynaa inaan kula abuuro berri qurux badan.